कुरा हिंसा–हत्याको होइन, क्रान्तिको हो – विप्लव - Chautari Post Online
सरकारले तपाईंहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो । यो प्रतिबन्धप्रति तपाईंको पार्टीको धारणा के हो ?
हो, हामीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । देशको अर्बौं रुपैयाँ ठग्ने एनसेलमाथि कारबाही गरेपछि यो घोषित प्रतिबन्ध लगाइयो । तर यो बहाना मात्र हो । सारमा प्रतिबन्ध भनेको वर्ग स्वार्थ र वर्ग हितसँग जोडिएको विषय हो । प्रतिबन्धले वर्ग विचार र हितको प्रतिनिधित्व गर्छ । हाम्रो पार्टीले करछली, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, मजदुर निकाला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दा केपी सरकारले हामीमाथि किन प्रतिबन्ध लगाउने ? कम्युनिस्टको सरकार भए त खुसी पो हुनुपथ्र्यो त । तर केपी–प्रचण्डहरू खुसी भएनन्, आक्रोशित भए । तर जनता त खुसी भए नि। यसले सावित र्गयोयो– केपी–प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार श्रमिक जनता, देशभक्त र लोकतन्त्रवादीको होइन, यो दलाल, कमिसनखोर, ठग, तस्कर, भ्रष्टाचारीहरूको सरकार रहेछ ।
यो प्रतिबन्ध एक्काईसौं शदीको विचार– राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिकहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न पाउने, जनता र देशको सेवा गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध छ । साथै, गलतका विरुद्ध विरोध र विद्रोह गर्न पाउने जनताको अधिकारका विरुद्ध छ । यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेका लागि पनि लज्जास्पद कदम हो। यसले राज्यको अराजकतावादी चरित्र मात्र होइन, फाँसीवादी अनुहार पनि उदंग्याउँदै छ ।
अर्को कुरा, केपी सरकार आफ्नै पार्टीका नेताले प्रतिवाद गर्ने स्तरमा असफल भयो । यसले चौतर्फी असफलता र संकटको सामना गरिरहनु परेको छ। राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, तस्करी, विभिन्न काण्डहरूमा डुब्न पुगेको छ । यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताका बीचमा लोकप्रिय र प्रभावी बन्दै गएको छ । हजारौंहजार नेता–कार्यकर्ता र जनता हाम्रो पार्टीवरिपरि गोलबन्द बन्दै गए । सत्ता संघर्षमा दलाल पुँजीवादी सत्ताको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित बन्दै गएको छ । यी सारा घटनाबाट जनताको ध्यान मोड्न प्रतिबन्धको हावा खडा गरिएको छ । यो प्रतिबन्ध वास्तवमा केपी सरकारको असफलता र संकटको अभिव्यक्ति मात्र हो । त्यही भएर हो यो प्रतिबन्धलाई सारा राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुनविद्, मानवधिकारवादी र विभिन्न संघसस्थाले खुलेर विरोध गरेका छन् । केपी सरकार एक्लिएको छ । हाम्रो माग छ– केपी सरकारले यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ ।
चैतभित्रै प्रतिबन्ध फिर्ता नलिए सरकारलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै वक्तव्य दिनुभयो, सरकारले फिर्ता लिएन, तपाईंहरू प्रतिरोधको कुरा गरिरहनुभएको छ, कस्तो खालको प्रतिरोधको कुरा गर्न खोज्नुभएको हो ?
यो राज्यले हाम्रो पार्टी र मुक्तिकामी जनताविरुद्ध लादेको फाँसीवादी प्रतिबन्धको प्रतिरोध हो । जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिन हाम्रो स्थायी समितिले यो निर्णय गरेको हो । राज्य बलजफ्ती आउने हो भने उसले पनि कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्नेछ ।
तपाईंहरूलाई वार्तामा बोलाएको तर वार्तामा नआई हिंसात्मक घटनामा संलग्न हुन थालेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारले बताइरहेको छ, वार्ताप्रति तपाईंहरूको धारणा के हो ?
यो एकदमै झूटो प्रचार हो । पहिलो कुरा, सरकारले हामीलाई आधिकारिक ढंगले वार्तामा बोलाएको होइन, त्यस अर्थमा वार्तामा आएन भन्न मिलेन । दोस्रो– वार्ताबाट त हामी फर्किंदै छौं । जतिबेलासम्म वार्ताबाट जनअधिकार र देशका प्रस्तावहरू पास होलान् भन्ने थियो त्यसबेलासम्म त प्रचण्डहरूसहित हामी वार्तामै थियौं नि । तर जब वार्ताका नाममा जनयुद्धका सारा प्रस्ताव र उपलब्धिलाई खरानी पार्न थालियो, देशलाई पराधीन र जनतालाई अधिकारविहीन बनाउन थालियो तब न हामीले विद्रोह गरेका हौं । आज पनि वार्ताबाट न हामी तर्सिन्छौं न त वार्ताले क्रान्तिले उठाएका विषयलाई समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । जहाँसम्म वार्तामा नआएर हिंसामा गएको भन्ने प्रचार छ, यो त पूरै गलत प्रचार हो । हामीले त देश डुबाउने एनसेल, मानव तस्कर, महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउने फटाहा र मजदुरलाई दमन गर्ने मालिकविरुद्ध कारबाही गरेका थियौं । यसमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ?
सोमनाथ पाण्डे नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीसँग कुन चरणसम्म तपाईंहरूको वार्ता÷संवाद भएको थियो ?
सोमजी र अन्य साथीहरूसँग हाम्रा कमरेडहरूको भेटघाट र अनौपचारिक कुराकानी नभएको होइन तर सरकारले आधिकारिक पहल त गरेन नि ।
वार्ताका लागि तपाईंहरूका एजेन्डा के हुन् ? के मुद्दामा वार्ता गर्ने ? तपाइँहरूका माग के हुन् ?
वार्ताको कुरा नै नभएको स्थितिमा यहाँ हाम्रो विषय के हुन् भनेर चर्चा गर्नुको के अर्थ छ र ? तैपनि छोटोमा भन्दा हामी देशबाट दलाल पुँजीपति वर्गले जसरी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बजार, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य सारा कब्जा गरेर देशलाई टाट पल्टाउँदै र जनतालाई कंगाल बनाउँदै छ, त्यसको अन्त्य चाहन्छौं । हामी त दलाल पुँजीवादी सत्तालाई मिल्काउन क्रान्तिको मार्गमा छौं नि ।
सरकारको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने शीर्ष नेताहरूको समेत हत्या योजना तपाईंहरूले पार्टी बैठकबाटै बनाउनुभयो रे, के भन्नुहुन्छ ?
यति गम्भीर विषयलाई बजारको व्यापार गराइएको छ, यो नै अनौठो लाग्छ। यो प्रस्ट कुरा हो कि राज्यले हाम्रा नेताहरूलाई इन्काउन्टरसम्मको योजना बनाएर शक्ति सञ्चालन गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
खुलेआम हिंसात्मक संघर्षको घोषणा पनि गर्नुभएको छैन, तर हिंसात्मक घटना पनि तपाईंहरूका नाममा भइरहेको छ, खासमा संघर्षको स्वरूप के हो ?
पत्रकार मित्र, कुरा हिंसा–हत्याको होइन, क्रान्तिको हो । हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाउन, देशका श्रमिक जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउन, सबै उत्पीडित, शोषित, दमित श्रमिक वर्ग र जनतालाई मुक्त गर्न दलाल पुँजीवादी सत्तालाई मिल्काउने र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य हो । क्रान्ति त्यस्तो एकीकृत संघर्षको कूल योग हो, जहाँ सबै संघर्षका रूपहरू अनिवार्य हुन्छन् । हामीले जे कारबाही गरेका छौं, प्रस्टै जिम्मा लिएका छौं नि, कहाँ छ भ्रम ?
तपाईंले एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा जनमुक्ति सेना बनेको र त्यो सुदृढीकरणतिर जाँदै गरेको बताउनुभएको थियो, यो कस्तो खालको सेना हो, यसले तत्काल गर्ने के हो ?
सेना भनेको राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि संघर्षरत श्रमिक जनतालाई सफल बनाउन लड्ने शक्ति हो । जनमुक्ति सेना भनेको सबै उमेरका नरनारी आफ्नो अधिकार र मुक्तिका लागि भाग लिने सेना हो। प्रचण्डहरू र एमाले—कांग्रेसहरू मिलेर विसर्जन गर्न खोजेपछि हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं जनमुक्ति सेनाको आवश्यकता सकिएको छैन । यो आवश्यक छ, हुनेछ र संगठित गरिनेछ । त्यही भएको हो अरू के हो र ?
वार्ताका लागि तपाईंहरूलाई सरकारका तर्फबाट केही सर्तसहितको प्रस्ताव पनि गएको थियो भनिन्छ, सरकारको तर्फबाट के प्रस्ताव आएको थियो ?
त्यस्ता सर्त र प्रस्तावबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन । तर वार्ता गर्ने भनेपछि प्रस्ताव त पक्कै भइ नै हाल्छन् नि । वार्ता नभएको स्थितिमा कसरी थाहा हुन्छ र ?
अहिले पनि सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग, अझ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका नेताहरूसँग तपाईं र तपाईंका पार्टीका कतिपय नेताका औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल भइरहेकै छ भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
राजनीतिक छलफल आवश्यक र सम्भव भएमा मुद्दाअनुसार जोसँग पनि हुन सक्छ। हामीले छलफललाई सहज बनाएका छौं । यसबारेमा धेरै कुरा गरिहाल्नुपर्ने खास विषय केही छैनन् ।
मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत अन्य समूहसँगको एकता पनि तोडियो क्यारे, खासमा तपाईंहरूको संघर्षको मित्रशक्ति को हुन् ?
एकता प्रक्रिया नै चलेको छैन, कहाँ भाँडिन्छ। उहाँहरूसँग छलफल चलिरहेको छ। विचार—राजनीतिमा मेल खएपछि एकता हुन्छ। तर सयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकतामा हामीले काम गरिरहेका छौं। यो खुसीको कुरा हो। मित्रको उल्लेख गर्दा यतिबेला केपी सरकारको राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, महँगी, प्रतिबन्ध र फाँसीवादविरुद्ध जो उत्रिन तयार हुन्छन्, ती सबै मित्रशक्ति हुन्।
एकताका सम्भावना छन् कि छैनन् ? छन् भने केकेका आधारमा एकत वातावरण बन्न सक्छ ?
एकताका सम्भावना छन् तर मैले माथि भनिसकें कि विचार—राजनीति र कार्य्दिशा मिलेपछि एकता हुन्छ।
प्रकाण्डसँगको अन्तरविरोध के हो ? शक्ति पूरै छिन्नभिन्न भइरहेको छ, पार्टी्भित्र अन्तरविरोध चुलिएको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
हो, यस्तो प्रचार निरन्तर पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ। हामी पनि पत्रिकाबाटै थाहा पाउँछौं। कहिले रमाइलो लाग्छ भने गम्भीर पनि बनाउँछ। सायद हामीलाई विचार, राजनीति र व्यवहार कतैबाट पनि रोक्न र असफल पार्न नसकेपछि संगठनको विषयमा घोच्दा केही निस्किन्छ कि भनेर यसो गरेका होलान् जनताका बैरीले भन्ने लाग्छ। तर उनीहरू आफैं जनतामा उदांगिने र बदनाम हुने बुद्धि हो यो।
हामीले कसरी पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष र्गयोयौं, कसरी पार्टी बनायौं, कसरी क्रान्तिको खाका खिचेका छौं र कसरी काम गर्दै छौं हामीलाई थाहा छ । यो कुनै लोभीपापी र स्वार्थीहरूको खेलो होइन, नेपालमा क्रान्ति गर्ने र वैज्ञानिक समाजवाद—साम्यवाद ल्याउन गरिएको विशिष्ट पहल हो । हाम्रो पार्टी एकपछि अर्को उचाइमा विस्तार र सुदृढ हँुदै छ र क्रान्तिले यसलाई सार्थक पार्ने छ । कहिले भने काँचो दाउरामा आगो झोस्ने प्रतिक्रियावादीको चाल हेर्दा ओहो यस्तो पनि हुने रैछ, क्रान्तिलाई सफल पार्ने चुनौती सामान्य छैन भन्ने महसुस हुन्छ । अनि हामी झन् एकताबद्ध बन्छौं ।
तपाईंहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले परिचालन गरिरहेको र संरक्षण गर्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
आफ्नो प्राण भर्न पनि विदेशी गल्ली चाहर्दै हिँड्ने दुई कौडीका कायरहरूले गर्ने प्रचार हो यो । यसलाई पागलहरूले पनि विश्वास गर्दैनन् । वैज्ञानिक समाजवाद—साम्यवादको विचार नै श्रमिक वर्गीय विश्वलाई प्रज्ज्वलित र परिचालित गर्ने जादुको हतियार हो ।
विभिन्न ठाउँमा भएका हिंसाका घटना चन्दाकै लागि भएको भनिन्छ, एनसेलमाथिको आक्रमण पनि त्यही प्रयोजनका लागि थियो भनिन्छ?
महाकाली, कर्णाली, अरूण बेचेर खाने, त्यसले पनि नपुगी कमसिनखोर, ठग, सुदखोर, तस्कर, डनहरूलाई पालेर बसेका र उनैको स्वार्थमा टुप्पी डुबाउँदै हिँड्ने पाखण्डीहरूले मच्चाएको चीत्कार हो । जहाँसम्म चन्दाको कुरा छ, क्रान्तिले एउटा दिन ल्याउनेछ स्वयं यी भन्नेहरूले पनि खुसीसाथ दिनेछन् । हाम्रै क्रान्तिको बलमा यिनको जीवन पनि बाँच्नेछ ।
कम्युनिस्टहरू श्रममा बढी विश्वास गर्छन्, जनतासँग सियोधागो पनि नलिनु भन्छन्, तर चन्दा उठाउनु नैसर्गिक अधिकारजसरी तपाईंले वक्तव्य नै दिनुभयो, कसरी बुझ्ने यसलाई ?
हो त तपाईंले भनेका कुरा हामीले भनेका छौं । श्रमिक जनताको धागो पनि लिनु हुँदैन र हामीले लिएका पनि छैनौं । हामीले त जनतालाई उल्टो दिने हो र दिई पनि रहेका छौं । सुकुमवासीलाई गाँस, वास, मजदुरलाई कामअनुसारको दाम, महिलालाई पुरुषसमान सम्पत्ति, युवालाई रोजगार, विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा, जनताका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य दिने भनेर त लडिरहेका छौं । यो त जनताले पनि बुझेका छन् ।
अनि जनताले हाम्रो नेतृत्वमा आफ्नो मुक्तिका लागि ज्यान पनि दिँदै आएका छन्। मैले भनेको त जनताले मुठी उठाएर दिन्छन्, उद्योगीले सहयोग गर्छन्, ठग, तस्कर र भ्रष्टहरूलाई ठोकेर लिनुपर्छ या उनीहरूले जनतबाट लुटेको सम्पत्ति कब्जा गरेर जनतालाई नै दिनुपर्छ । क्रान्ति भनेकै त यही हो । यही त कम्युनिस्ट पार्टीको नैसर्गिक अधिकार हो ।
पार्टीभित्र आर्थिक अराजकता देखिएको, आर्थिक नीति एकद्वार प्रणालीका आधारमा बनाउने भन्नेजस्ता विषय तपाईंका कतिपय डकुमेन्टमा उल्लिखित पाइन्छ, यो केलाई संकेत गर्नुभएको हो ?
धेरै नभनौं तर यो कुरा एकदमै स्पष्ट हो कि क्रान्तिको जटिल प्रक्रियामा रहँदारहँदै पनि हामी नै हौंला आर्थिक विषयलाई संस्थागत प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने । हामीसँग पार्टी बनेदेखिको हिसाबकिताब पूरै पारदर्शी छ । हामीले महासचिवदेखि कमान्डर, सदस्यसम्मको आर्थिक जीवन संस्थागत गरेका छौं । अब पूर्णकालीन कार्यकर्तासम्मको मिलाउँछौं । हाम्रो अनुसन्धानमा कम्युनिस्टहरू सकिनु र समाजवाद असफल हुनुको पछाडि अर्थ सम्बन्ध र स्वामित्वमा रहेको समस्या नै प्रमुख हो ।
साम्यवादको सपना देख्नेले आफ्नै जीवन पारदर्शी गर्न नसक्ने, आवश्यकताअनुसारको दाम भन्नेले पार्टीको पैसा कुम्लो पारेर विदेशी बैंकमा लुकाउने, देशै बेचेर कमिसन खाने र उल्टो चर्का कुरा गर्ने, सरकारी जग्गा निल्न बाँकी नराख्ने हुनु नै यसको समस्या हो । हामी कम्युनिस्ट अर्थदृष्टिकोण, कम्युनिस्ट जीवन, अर्थउत्पादन र वितरणबारे कैयन् महत्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्दै छौं । हामी माक्र्सले अनुसन्धान गरेको साम्यवादी अर्थजीवन दिनुपर्छ भन्नेमा लागिपरेका छौं, जो पुँजीवादभित्रको कथित निजी जीवनभन्दा सयौं गुणा श्रेष्ठ र सभ्य हुन्छ । विश्वास छ– हामी साम्यवाद दिन सक्ने छौं ।
२०५२ सालदेखि सुरुआत भएको जनयुद्धपछिको शान्ति प्रक्रियाकै बाँकी काम पूरा हुन सकिरहेको छैन, तपाईंहरूको नयाँ द्वन्द्व के थेग्न सक्छन् जनताले ?
तपाईंले भन्नुभएको सही हो– जनताले द्वन्द्व थेग्न सक्दैनन् । त्यसैले त हामीले ६५—६६ सालदेखि नै भन्दै आएका छौं– पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादी, संशोधनवादी, अवसरवादी, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले जनतालाई जनयुद्धका उपलब्धिबाट पछाडि फकाएर जानाजान द्वन्द्व भड्काउँदै छन् ।
जनताले माओवादीलाई साथ दिएपछि दलाल पुँजीवादी सत्ता लाद्न द्वन्द्वतिर लगिँदै छ । जबर्जस्त दलाल पुँजीवाद लाद्नु भनेको द्वन्द्वमा देशलाई ठेल्नु त हो । आखिर भयो त्यस्तै । अब जनताले विशेषतः शोषितपीडित श्रमिक जनताले बुझेका छन्– द्वन्द्वको समाधान क्रान्तिभन्दा अर्को तरिकाले सम्भव छैन। जनताले द्वन्द्व होइन, क्रान्ति गर्नेछन्। हामी क्रान्ति गर्ने छौं । क्रान्ति थेग्ने कुरा होइन जनता स्वयंले गर्ने कुरा हो ।
यसको व्यवस्थापनबारे के सोच्नुभएको छ ?
हेर्नुस्, हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा केवल पार्टीको हितका लागि गरेका छैनौं । आज दलाल पुँजीवादी सत्ताको कारणले कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी सबै आक्रान्त छौं । कुनै एक शक्ति एक्लै लडेर यसको पार लाग्दैन । हामी सबै मिलेर देशमा आजसम्म प्राप्त हुन नसकेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा गयौं भने सबै जनताको उद्देश्य पूरा हुनेछ । कम्तीमा हाम्रै खुट्टामा उभिएर आफ्नै देशबारेमा सोच्न सक्ने छौं ।
तपाईंहरूले लड्न खोजेको सत्तामा त आफ्नै पूर्वकमरेडहरू पुगेका छन्, के यो प्रतिकूलता लाग्दैन ?
यहाँनेर अलिकति भावनातिर गएर भनौं भने हेर्नुस्, यो हाम्रा लागि प्रतिकूलतासगै अनुकूलता पनि त हो। नेतृत्वले गलत कदम चालेपछि कमरेडहरूको ठूलै संख्या त्यहाँ पुगेको छ । तर यी साथीहरू पनि त हिजैदेखि खराब थिए भन्ने होइन नि । हामी सबै अग्निपथमा हिँडेकै कमरेडहरू त हौं । सबैको ज्यान बमगोलाभित्रै त थियो । हामी हिमालको हिउँमा पुरिँदा, हिउँद—बर्खाका नदीमा बग्दा, दर्जनौं कमरेडहरूलाई एउटै खाल्डोमा दफनाउँदा, मोर्चामा रगत र आँसु पुछ्दै देखेका सपना त एउटै त थिए ।
हामीले मुक्ति र बलिदानभन्दा अरू के देखेका थियौं र ? एकदमै मिल्ने र काँध जोडेर जीवनका धेरै समय लडेका कमरेडहरू पनि त त्यहाँ छन्। के तिनले हामीलाई क्रान्ति गरेबापत समाप्तै पार्ने मात्र सोच्लान् ? उनीहरू त्यहीं बसेर पनि त क्रान्तिलाई सहयोग गर्न सक्छन् । हामीले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने अठोट गर्दा बिच्किन र चिढिन किन पर्छ र ? क्रान्तिको निर्ममता आफ्नै ठाउँमा छ । हामी सबै चुनौती सामना गर्न तयार भएर त यो मार्गमा डटेका छौं ।
अन्त्यमा थप केही भन्नु छ ?
विषय राख्ने अवसरका लागि तपाईंको पत्रिकालाई धेरै–धेरै धन्यवाद ! अन्नपूर्ण पोस्टबाट
२०७६ वैशाख ३० गते सोमबार प्रकाशित
Prevग्रिजमन एट्लेटिको छाड्ने
Nextकेका लागि, के भनेर जाग्ने शेरबहादुरजी ?